Dareemo weyn! Dream Dubai !! - Waan kugu jeclahay Dubai! Hambalyo qadarin !!
Dareemo weyn! Dream Dubai !!
Dhamaanba ku saabsan Goobta Ganacsi ee Dhulka Ganacsi ee UAE
Waxaa laga yaabaa 8, 2019
Ku noqo Blogger Shirkadda Dubai City!
Published by Shirkadda Dubai City at Waxaa laga yaabaa 9, 2019
Riyo Big! Dib ugu guur Dubay !!
Riyo Big! Riyo Dubai!! Dubay, Dhul Fursad, Dhul Hogaamiyayaal Weyn, Land of Kala-duwanaanta, Dhul edbin, Dhul-abuur, Dhul isbedel joogto ah, Dhul farxad iyo farxad leh, Dhul nabad ah, Dhul jacayl iyo daryeel, Dhulka Sinnaanta, Waan sii socon karaa ……
Waxay dhahaan “qalbigeygu halkaasuu yaal”, laakiin aniga ayaa ah “Naftaydu halkaasay ku jirtaa”. Safarkaygii Dubay wuxuu ahaa mid lama filaan ah oo aan ku riyoon. Waxay u dhacday sidii sixir waqtigii aan si xun ugu baahnaa shaqo iyo dakhli, waxaanan ugu nasiibka badnaa inaan la shaqeeyo ururada waaweyn sida Jumeirah International iyo Al Ghurair Investment, sumadda iyo astaamaha Dubai. Ka sii badnaan kari maayo.
Dhulku wuxuu i tusay waa maxay farxad, ka dib markaan ka tago noloshii cidhiidhiga nolosha oo dhan ilaa Waxaan bilaabay inaan ku noolaado Dubai. Dhulku wuxuu iga caawiyay inaan ka soo baxo murugadayda wadista baabuurta, ma rumaysan karo inaan leeyahay oo aan kaxeeyey 3 baabuur oo aad ugu riyaaqay. Waxaan saaxiibo ugu yeeshay nolosha Dubai dhexdeeda! Mid ka mid ah hadiyadda ugu weyn ee nolosha ayaa leh saaxiibo cajiiba inta aad nooshahay.
Markii aan soo degay halkaas oo loogu talagalay meelaynta 6 toddobaadyo ah, yaa ogaa inuu noqon doono joogitaan toddobo sano ah. Noloshaydu waxay isku beddeshay mid wanaagsan oo aad u wanaagsan! Kufiican ugu fiican! Dubai waxay iga caawisay sidii aan uga gudbi lahaa ballanqaadyadeydii lacageed oo dhan oo aan weli nolosha ugaga tegi lahaa ugana badbaadiyo mustaqbalkeyga. Uma mahad celin karo.
Jacaylka Waaweyn! Jacaylka Dubai !!
Mararka qaarkood, ljacaylku wuxuu kugu riixayaa inaad qaadato go'aanno adag oo adag, iyada oo aan jirin wax ka reeban, waxay ahayd inaan ka tago Dubai ka dib markii sannadihii 7 ee dib-u-laabashada Hindiya 3 sano dib, iyada oo wadne culus oo murugo leh, sababao shaqsiyadeed dartood. Ma jiro maalin keliya Maan dhaafin Dubai. Xaqiiqdii, dib ayaan ula degay reerkii oo dhan si ay wali u dareemaan alaabteyda Dubai. Xitaa gacmahayga gacantu waa ka Dubai.
Weligay mahad baan u leeyahay Dubai wixii aan maanta ahay. Dubai waxay iga caawisay sidii aan ku gaari lahaa riyadeyda iyo aragtideyda noqoshada Tababaraha, Maskaxda iyo Tababaraha oo aad sameysaa shaqo riyadeed taasoo iga farxisa. Ka dib 20 oo lagu daray sannadihii khibradda shirkadda oo aad ku bilowdo ganacsi cusub, Tababbarka iyo horumarku ma ahayn safar sahlan. Kaydinta laga sameeyay Dubai waxay gacan ka gaysatay sidii aan u fulin lahaa hamigayga iyada oo gebi ahaanba diiradda la saarayo inkasta oo aanu jirin dakhli joogto ah. Dareenka dareenka mahadnaq weyn. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhaho waxaan ka mid ahaa Dubai!
Waxaan ku faraxsanahay inaan waxyaabo badan oo noloshayda ah hayo!
Maanta aad ayaan ugu hanweynahay, in aan nafteyda u abuurayo waxbarid iyo horumar, laga bilaabo orodka iyo socodka ilmaha ee garoonkan cusub ee la doortay. Haatan waa inaan mar kale u barooranayaa sidii quruxda iyo Falcon-ka quruxda badan ee Dubai. Hadda waxaan ahay aasaasaha Venture loo yaqaan Genius 21, oo ah tababbar xirfadeed iyo ganacsi isbadal, diiradda saaraya bixinta xirfadaha iyo isbadalka nolosha Waan imanayaa Waxaan sameeyay ku dhawaad ​​aqoon-isweydaarsiga 100 ee sannadihii 3 taabashada iyo dhiirrigelinta in ka badan nolosha 1000… Ma jiro shaqo ka sii qancisan tan tan.
Ahmiyaddayda diiradda Warshadaha Waxbarashada maadaama taasi ay tahay warshadda kaliya ee abuuri karta bini-aadamka cajiibka ah jiilasha hadda ahna aad ayey ugu baahan yihiin. Waxaan sameeyaa barnaamijyada ee Barista saaxiibtinimada, shaqaalaha aan waxbarista iyo ardayda xirfadaha kala duwan ee horumarka shakhsiyadda, Hoggaamin madaxnimo, xirfadaha barista, Macallimiinta sida Mowduuc Moodeed, Maskaxda carruurta ilaa 21st Xirfadaha Aasaasiga ah ee loogu talagalay Ardayda diyaarka ka ah Campus ilaa shirkad iyo wax ka badan.
Hadda waa waqtigii aan ku noqon lahaa Dubai waana riyadeyda hada inaan rajeynayo inaan kusii xirnaado Dubai oo aan kaqeyb galo aqoon isweydaarsi ku saabsan Waxbarshada Macalimiinta iyo Ardayda. Waxaan aaminsanahay in qof kastaa uu dhashay Genius awood u leh inuu ku guuleysto wax walba waxay rabaan nolosha waxayna ku riyoodaan si weyn. Sababta oo ah riyooyinku way rumoobaan, sida aan aniga u leeyahay oo kale runtiina aan ula noqon doono Dubai!
Waan ku jeclahay Dubai! Hambalyo qadarin !!
Qoraalkan waxaa qoray nin raacaya Shirkadda Dubai City kana soo jeeda Linkedin. Kooxdayadu waa ku mahadsan tahay taas kuwa raacsan waxay naga caawinayaan kobcinta Dubai adduunka oo dhan. Fadlan lasocod shirkadayada Linkedin.
Dubai City Shirkadda hadda bixisa Tilmaamaha wanaagsan ee Shaqaalaynta ee Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hadda waad heli kartaa hagayaal, talooyin iyo shaqaalaynta Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.